Faah-faahin ku saabsan dagaalkii ay AL-SHABAAB kusoo qaadeen BAXDO - Caasimada Online
Home Warar Faah-faahin ku saabsan dagaalkii ay AL-SHABAAB kusoo qaadeen BAXDO
Faah-faahin ku saabsan dagaalkii ay AL-SHABAAB kusoo qaadeen BAXDO
Cadaado (Caasimada Online) – Wararka ka imaanaya deegaanka Baxdo ee gobolka Galgaduud oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Cadaado ayaa sheegaya in aroornimadii hore ee saakay dagaalamayaasha Al-shabaab ay dagaal kula wareegeen qeybo ka mid ah deegaankaasi.
Dagaalka ayaa bilaawday kadib markii dagaalyahanada Al-Shabaab weerar xoogan oo dhowr jiho ah ku qaadeen deegaanka Baxdo, waxaana ay halkaasi iska caabin xoogan kala kulmeen Al-shabaab dadka deegaankaasi, iyadoo mudadii uu dagaalka socdayna la isku adeegaaday hubka noocyadiisa kala duwan.
Sida ay dadka deegaanka u sheegeen Caasimadad Online, dagaalka ayaa ahaa mid aad u xoogan islamarkaana wuxuu xoogiisa ka dhacay gudaha deegaanka Baxdo, waxaana la soo warinaya in dagaalka uu geystay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawacba leh, walow aanan la xaqiijin karin inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha.
Al-shabaab ayaa dib looga saaray gudaha deegaanka Baxdo, mana jirto wax war ah oo kasoo baxay dhanka maamulka Galmudug oo ku aadan dagaalka Shabaab saakay kula wareegeen deegaanka Baxdo oo markii dambe lasoo sheegay in dib looga saaray.
Al-shabaab ayaa inta badan weeraro noocaan oo kale ah waxay horay ugu qaadeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan maamulka Galmudug oo ay ku wada sugan yihiin ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Galmudug.